Park Central ao amin'ny City Walk an'ny Meraas - Dubai Real Estate an'ny Provident
Raha niditra ny March 2019 isika dia mahita tombon-tsoa goavana manerantany ao amin'ny Central Park any an-tanànan'i Meraas.
TSY MAINTSY MANDEHA - MPANJAKA NY ZAVA-MISY
Park Central ao amin'ny City Walk dia toerana mahagaga ho an'ny fahasalamana ara-pahasalamana sy mavitrika, miaraka amin'ny fandehanana mivezivezy amin'ny maraina, ny rivotra madio sy ny takariva mahafinaritra anisan'ny fomba fanaonao. Mialà fiadanana eo amin'ny fiainanao isaky ny maniry, ary mahita ny trano fisakafoanana tsara indrindra, cafes, fivarotana be pitsiny ary ny fialam-boly farany eo amin'ny varavarankelinao.
Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Ohatra tsy ampy amin'ny teny esperanto City Walk. Ity làlam-piorenan'ny tanànan'i Meraas ity dia fiainam-pianakaviana mpifankatia ary manana toeram-pivarotan-tena miavaka sy fonenana tsy manam-paharoa. Miaina ao anaty oasis akaikin'ny zavatra rehetra ilainao mandritra ny iray andro tsara aorian'ny iray hafa. Mahatsiaro ho akaiky kokoa ny zava-drehetra ny zavatra rehetra. Ny Park Central ao amin'ny City Walk dia noheverina fa ny ho avy ao an-tsaina. Ireo trano matevina, misy amin'izao fotoana izao sy malalaka dia manome fomba fijery mahavariana momba ny valan-javaboary ary koa ny renivohitra renivohitr'i Dubai. Misafidiana eo anelanelan'ny efitrano 1, 2, 3 & 4 miaraka amin'ny fanehoana mahavariana sy fahalalaham-ponenana ao anaty vondrom-boly maitso.
Vondrom-piarahamonina vazivazy ao an-tanàn-dehibe manokan-trano 1-4
Apetraka amin'ny trano matevina, amin'izao fotoana izao ary malalaka
1, 2, 3 & 4 trano fidiovana
Toeram-piompiana ankizy, kianja mitaingina, tennis & basket ball courts
Toeram-piofanana an-kalamanjana, toeram-pitsaboana, spa sy sauna
Toeram-pisakafoanana tsara indrindra, Cafes & Toeram-pivarotana tsara indrindra
Any amin'ny toerana tena malaza any Dubai City Walk
5 dia mipaka any amin'ny Downtown Dubai & 10 ary ny Jumeirah Beach
5 minitra avy ao Dubai Arena
10 minitra mankany Jumeirah Beach
15 minitra mankany Burj Al Arab
15 minitra mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena any Dubai
16 minitra mankany La Mer Beach
17 minitra mankany amin'ny Palm Jumeirah
20 minitra mankany Dubai Marina
Minitra 50 mankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Al Maktoum
Previous PostPrevious Toeram-pialantsasatra ivelan'i Dubai avy any Emaar
Next PostManaraka Ny Dubai Championships Simona Halep dia nandresy an'i Ms Bennick